Dzokerai kuElement Society (yedu basa peji) (inosanganisira NCS mabasa)
Unoda here kushanda nevechidiki uye uchivaona vachiwana zvisingatenderwi? Zvadaro shandisa kuti ubatane neboka redu!
Mukushanda paElement Society iwe unobatsira vechidiki kuwana zvisingatenderwi, iwe uchapa simba vechidiki kuti vashandure mharaunda yavo, kuwedzera zvido zvavo uye kuva mienzaniso kune vezera ravo.
Element Society ndiyo yakanyoreswa charity (nhamba: 1157932), kambani yakanyoresa zvishoma nechirongwa (nhamba: 08576383) uye mubhadhadzidzi wekudzidza akanyorwa (UKPRN: 10047367).
Element Society yakatsunga kuchengetedza vana nevaduku.
Element Society is Equal Opportunities employer.
Iwe uri vanhu vanhu vane shungu yekuita mutsauko here?
Upenyu hunochinja hupenyu hweNCS hunenge husingaitike kunze kwebasa rakaoma rekusimudzirwa kwevashandi vedu.
Iwe unogona kuva chikamu chekushamisa kwechikwata chinoshamisa. Vashandi vedu vegore vari pamwoyo weNCS, uye tinozvikudza nezvezviuru zvevanhu vanokurudzira, kutungamira uye kukurudzira vechidiki parwendo rwavo rweCSS. Kubudirira kweNCS hakuzoitike kunze kwekuchiva nekutsaurira kweboka redu reNNC ​​rekuchengeta gore.
Kana iwe uchida kune rimwe remabasa aya, tapota tevera pasi apa magwaro uye e-mail fomu yekushandira kuCSC Team yedu - ncs@elementsociety.co.uk
ZUVA ROSE POSITIONS
Tinoda kushanda nevanhu vane shungu yekutsigira vechidiki kuti vaite zvisingatenderwi.